Ampanjaka ao amin’ny fokontany sanatria ? - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Tsara ny hevitra. Saingy…
Niezaka nitety ireo trano fandraisam-bahiny malaza nanontany sao efa misy amin’ireo olobe ireo no efa tonga eto antoerana. Na iray aza tamin’ireo trano ireo tsy manana famandrihana efitrano maromaro.
Nanontaniana ihany koa ireo fikambanana mba efa re ny fijoroany toy ny FCRTM, Fédération des communautés royales et traditionnelles de Madagasikara na koa ireo olobe avy amin’ny faritra ka mipetraka eto Antananarivo. Na iry voalohany na io faharoa dia samy tsy mahalala io fotoana io. Samy nilaza fa tsy mbola nahazo fanasana. Nanaitra ihany izany valinteny izany.
Dia roso ny dia nitady ireto mpiandraikitra an’ity fandaharam-potoana heverina ho goavana ity. “Eo Ampefiloha ny fotoana e” hoy ny tangalamena Ramandimbison Paul. Restaurant iray eo Ampefiloha ao Antananarivo io toerana notondroiny hifankahitana io. Nambarany fa ao izy ireo no mivory matetika. “Dia ny tena no gaga” raha indramina ny fitenin’ny tanora. Raharaham-pirenena ve no hatao dia ao no fanomanana azy ? Azy ireo moa izany fa tsy an’ny tena.
“Raikitra ihany ve, tompoko, ny fotoan-dehibe ho tontosaina ny alatsinainy 15 desambra ?” no fanontaniana napetraka taminy voalohany. Eny no valin-teny azo ary tsy ankihambahamba izany. “Firy no olona heverina ho avy ?” Dia nitanisa ity mpiandraikitra : « Nosy Varika olona 50, Toliara : 60, Antsiranana : 79, Toamasina : 80, Mahajanga : 46 ». “Dia gaga ny tena” mandre izany sao mba sanatria tangalemana tsimponina any amin’ny fokontany any aza ireto nantsoina ireto ?
Mikasika ireo fanasana dia nomarihany rehefa nanontaniana izy fa mbola tsy lasa ny fanasana ho an’ny manam-pahefana isan-tokony. “Dia gaga ny tena” raha indramina ny fitenin’ny tanora.
Sanatria kilalaon-jaza ve ity hataon-dry zareo ity ? Ialana tsiny amin’ny zaza fa efa fiteny raikitra moa izany. Sa olona mbola tsy vory saina no mikarakara ? Marihina fa olona efa voky taona i Ramandimbison Paul. Tsaroana etoana ny fanamarihana nataon’ireo Tangalamena avy any amin’ny faritra monina eto Antananarivo. “Tokony mandeha any amin’ny faritra nihavian’io olona mijoro ho tangalamena io ianareo mpanao gazety mijery ny fototra maha tangalamena azy” hoy ny anankiray. Noraisina ho fanamarihana avy amin’ny olona mialona izany teo aloha teo. Tsy mbola fantatra hatreto ny hasin’ny maha tangalamena.
Inona moa no antom-pivoriana ? Tsiahivina fa hamory tangalamena sy ampanjaka ary ireo anarana maro mitovy lenta amin’izany toy ny olobe ary mpanotrona ny vahoaka ka hampihavana no tanjon’ny hetsika. “Heverinay fa tsy mahavita ny fampihavanana intsony ny FFKM ka izany no mahatonga anay miroso hanao ny fampihavanana” hoy Ramandimbison Paul. Nambarany fa efa misy amin’izy ireo iraka manokana mifampiresaka amin’ireo mpitondra firenena nifandimby (Zafy Albert, Ratsiraka Didier, Rajoelina, Ravalomanana…). Nambara fa nampiantso azy ny filoha Rajaonarimampianina kanefa rehefa nozohina izany dia mbola tsy nisy io fampiantsoana io ary mbola tsy nihaona tamin’ny filoha Rajaonarimampianina ireto mikasa hampihavana ireto. “Nofy ririnina amin’ny fotoam-pahavaratra ve ?” asa lahy fa maha lasa saina. Raha ireo olona mitonona ho hendry no manao raharahan’adala dia ho aiza hono isika !!!!
Zon’ny olompirenena tsirairay tokoa no mitady vahaolana ho an’ny firenena fa ny fanimbazimbana ny hasina misy eo anivon’ny fiaraha-monina kosa tokony hisy fanasaziana an’ireo manao izany. Fanasaziana tahaka ny karatra mena hita eny amin’ny lalao baolina kitra. Izay mahazo karatra mena dia tsy mahazo milalao intsony.Tokony hisy fanasaziana tahaka izany koaomena an'ireo mpanao politika sy ireo olobe tsy mahala ny toerana mendrika sahaza izany olobe sy mpanao politika vanona izany. Maro loatra ireo mirefarefa e.